Logo tsara indrindra: ny fantatra indrindra amin'ny tantara | Creatives Online
ny logo efa nisy hatry ny ela. Izy ireo dia fanehoana an-tsary ny marika misy azy ary manana tanjona ny ho voasokitra ao an-tsain'izay mahita izany mba ho tsaroana sy ho fantatra. Saingy, tsy misy logo tokana tsara indrindra, fa maro amin'izy ireo.
Nandritra ny taona maro dia nisy ny logo izay niteraka fahatsapana ary mbola mavitrika ankehitriny ary fantatra na dia tsy mitondra ny marika aza. Ohatra fotsiny ny voay Lacoste, ny saribakoly vita amin'ny pneu Michelin, na ny paoma voakaikitry ny Apple. Fa mba tianao ho fantatra inona no logo tsara indrindra teo amin'ny tantara? Manao famerenana ho azy ireo izahay.
1 Nike, io ve no logo tsara indrindra?
3 Ny London Underground
7 Ny omby Osborne
Nike, io ve no logo tsara indrindra?
Tsy isalasalana fa, nandritra ireo fanadihadiana maro natao (indrindra tany Royaume-Uni sy Amerika), dia nampiakatra ny Nike izy ireo. tamin'ny fotoana imbetsaka nahazo ny loka voalohany amin'ny logos tsara indrindra teo amin'ny tantara.
Tsy isalasalana fa ny 'swoosh' Nike no logo tsara indrindra amin'ny fankatoavana. Samy mahafantatra izany amin'ny marika ny tsirairay na dia tsy misy anarana aza.
Ary rehefa miresaka momba izany isika, fantatrao ve fa misy ifandraisany amin'ny elatry ny andriamanibavy Nike? Andriambavy grika io ary nahazo tsindrimandry avy amin'i Carolyn Davidson tamin'ny famolavolana ny logo.
Noho io fanekena io, na dia eo aza ny fiovana faran'izay kely natao, dia mbola ny logo fanta-daza indrindra amin'ny maro izay misy.
Ny fanomezana anarana hoe Apple dia mahatonga ny sainao hamorona sarin'ny paoma iray (matetika volafotsy) misy kaikitry ny ilany havanana. Misy rambony ve anefa io paoma io? Ary ravinkazo? Koa izao no nametrahanay anao?
Tamin'ny voalohany dia tsy nisy ifandraisany tamin'ilay fantatsika ankehitriny ny logo. Ary ny zava-misy dia io sary famantarana voalohany nananan'izy ireo io dia sarin'i Isaac Newton teo ambanin'ny hazo paoma iray, misy paoma teo amin'ny lohany (ary ny fanondro mahazatra momba ny angano izay nianjera teo amin'ny lohany ary nisy hevitra 'lehibe' tonga tao. azy). Na izany aza, i Steve Jobs mihitsy no nahalala fa tsy hahomby izany ary, ny taona nanaraka, dia niova ho amin'izao fotoana izao ny fango, saingy novolavolaina izy io, matetika amin'ny fanavaozana sy loko geometrika, mandra-pahatongan'ny ankehitriny.
Ary eo amin'ny haavon'ny hoe io no logo tsara indrindra teo amin'ny tantara, dia tsy maintsy ampidirintsika ao anaty lisitra izany hatramin'izao, ny fijerena azy fotsiny dia mahatonga antsika hamantatra ny marika (ary koa ny haitraitra, tsy maintsy lazaina).
Ny London Underground
Andao hiaraka amin'ireo logos tsara indrindra teo amin'ny tantara. Ary manao izany izahay, tsy amin'ny marika natao hamidy (raha lazaina amin'ny teny marina), fa hanolotra serivisy fitaterana. Inona no resahina? Eny, ny London Underground.
Raha mbola tsy nahita ny logo ianao taloha, ity dia a faribolana misy tsipika malalaka miloko mena sy bara manga, somary midadasika kokoa noho ny faribolana, eo afovoany misy anarana hoe "Ambany tany."
Ity endrika mety ho toy ny famantarana fiatoana ity, dia iray amin'ireo logos naharitra ela indrindra tany Londres, indrindra fa nifototra mivantana tamin'ny voalohany nananany, izay faribolana misy bara ihany koa (sy antsipiriany fanampiny) .
Tsy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo izay mahafeno fepetra ho logo tsara indrindra. Ary tsy ho kely izany, satria fantatry ny rehetra ny dikan'izany na dia tsy manana ny teny rehetra aza izy ireo. Ohatra, ny 'fitiavana' dia nosoloina fo ary ny 'New York', na ny 'New York' dia manana ny fanafohezana NY.
Na izany aza, hatramin'ny namoronana azy tamin'ny 1977 nataon'i Milton Glaser ho an'ny Departemantan'ny Varotra any New YorkNahavita niaritra izy io rehefa nandeha ny fotoana, indrindra satria maneho fitiavana tanàna.
Ho fanampin'izany, noho ity logo ity dia maro hafa mitovy amin'izany no natao ho an'ny tanàna hafa.
Araka ny fantatra, ny voalohany nivarotra ny Coca-Cola dia tany amin’ny fivarotam-panafody izy io hatramin’ny nahatongavany ho fanafody. Na izany aza, ny fotoana dia nahatonga azy io ho zava-pisotro malefaka lafo indrindra eran-tany.
La Ny logo dia noforonina voalohany tamin'ny 1887 Ary ny marina dia, afa-tsy ny tweaks amin'ny endri-tsoratra sy ny loko, ny marina dia voatazona ny fotony. Ny mety tsy ho fantatrao dia na dia ity logo ity aza dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fanafenana hafatra subliminal. Misy milaza fa misy elefanta miseho amin’ny teny hoe “Rambo”; Ny hafa indray milaza fa raha avadika mitsivalana izy io, dia azo adika avy amin'ny teny arabo (ny dikanteny dia "tsy Mohammed na Mecca"); fa raha apetrakao mitsangana dia mahita lehilahy fotsy mandrora amin'ny mainty ... Reality? Izay heverina ho iray amin'ireo logos tsara indrindra. Tsy miditra amin'ny karazana dinika hafa.
Fantatrao ve fa manana anarana ny saribakoly Michelin? Eny eny, antsoina hoe Bibendum, saribakoly kely noforonina tamin'ny kodiarana marika be dia be. Tandremo anefa fa tany am-piandohana, tamin’ny 1894, dia tsy mba toy izany, fa toy ny oram-panala voasaron’ny tady kokoa.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanatsara ny "figure" izy nefa tsy nihena ny fahony, na dia nihena be aza izy tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Gazety maro, sampan-draharaha mpanao dokam-barotra, ary na dia ny mpanao gazety aza no nanome azy io ho logo tsara indrindra tamin’ny taonjato faha-XNUMX. Ary ilay iray tamin'ireo nivoaka voalohany dia niseho niaraka tamin'ny antsy misy rà na tamin'ny sigara sy ny solomaso (fa tsy amin'ny endrika tsara tarehy toy ny ankehitriny).
Ny omby Osborne
Raha mamakivaky an'i Espaina ianao, dia mety ho hitanao amin'ny fotoana sasany ny takela-by eo amin'ny lalan'ny omby. Ny silhouette mainty fotsiny. Tsy misy intsony.
Eny, tokony ho fantatrao fa io no ilay fomba hampiroboroboana an'i Brandy de Jerez Veterano, avy any Osborne. Ary ankehitriny dia ambara ho "lova ara-kolotsaina sy ara-javakanto an'ny vahoakan'i Espaina" izy io. Noho izany dia azo lazaina fa io no logo tsara indrindra ho an'ny marikao.
Araka ny fantatrao, Shell dia orinasa angovo sy petrochemical saingy, Fantatrao ve fa talohan'izay dia orinasan'ny antitra, ny fahalianana ary ny akorandriaka tatsinanana? Marina ny anao.
Ho azy ireo dia tena nahazo tombony ny takalo solika ho an'ny akorandriaka tatsinanana. Saingy nanova tsikelikely ny orinasa ho amin'izao fotoana izao izy ireo. Ny zavatra notazonin'izy ireo dia ny logo nananany, na dia misy fiovana kely aza. Ary izany ve Raha teo aloha dia nampiasa akorandriaka izy ireo, tamin'ny 1904 dia nanomboka nampiasa akorandriaka izy ireo.
Nanomboka tamin'ny 1971 dia tsy niova ny logo, rehefa noforonin'i Raymond Loewy.
Araka ny hitanao dia maro ny logos, sy ny maro hafa izay navelanay tsy voatanisa mba tsy ho be loatra, izay mety ho mendrika ho logo tsara indrindra, fa ny marina dia izany dia hahatonga antsika tsy hiraharaha ny maro hafa. Fanampin'izay, miditra an-tsehatra eto koa ny hoe subjectivity satria na dia atao aza ny fanadihadiana hisafidianana ny tsara indrindra dia ny hevitry ny tsirairay avy. Noho izany, inona no logo tsara indrindra ho anao? Ampahafantaro anay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Logo tsara indrindra: ny fantatra indrindra amin'ny tantara